be happy: February 2012
ဒါတွေက တို့ တက္ကလိုလ်ရဲ့ ပုံရိပ်တွေပေါ့၊ မျက်စိရှေ့ကပုံရိပ်တွေပါ ဌာနပေါင်း ၄၉ ခု ရှိပြီ အာရှ ကြီးဆုံးတက္ကသိုလ်လို့ ပြောကြတဲ့နေရာပါပဲ။ ပုံတွေ အဆောက်အသီးတွေရဲ့ အမည်တွေကိုတော့ သီးခြားမရေးတော့ပါဘူး။ ဓါတ်ပုံမှတ်တမ်းအနေနဲ့ပဲ ထားလိုက်ပါတယ်။
Posted by suvannasan at 1:25 AM No comments:
ဒေးဒေး သို့ ပေးစာများ (၅)
အေးချမ်းတဲ့မနက်ခင်းလေးဖြစ်ပါစေလို့ ဘုန်းဘုန်းဆုတောင်းလိုက်တယ်။ အရင်ပေးစာ (၄) ထဲမှာ ဒီကိုရောက်ခါစ တွေ့ကြုံရတဲ့ နေထိုင်မှုအခြေအနေလေးတွေ ရေးထားတယ်။ အခု ဒီစာမှာတော့ ကံထူးလို့ စွယ်တော်ဖူးရတယ်ဆိုတာကို ပြောချင်တယ်။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ စွယ်တော်ဟာ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာ ကိန်းဝပ်တည်ရှိ ရှိတယ်။ လေးနစ် ဒါမှ မဟုတ် ငါး နှစ်မှတစ်ကြိမ် ဖွင့်တယ်လို့ ပြောသံကြားရတယ် တိတိကျကျတော့ မသိရသေးပါဘူး။ အဲ့ဒီအခါမှ တစ်နိုင်ငံလုံးက ဘုရားဖူးတွေ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ကဘုရားဖူးတွေနဲ့ စည်ကားလို့နေတယ်။ ဘုန်းလည်း ဒီလိုကြုံရခဲတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ကြုံရတာ အင်မတန်ကံထူးတာပေါ့။ တကယ်လို့သာ ဒီနှစ်မလာဖြစ်ပဲ နောက်နှစ်မှသာ ပညာသင်ထွက်ခွါရရင် ဒီလို ကြုံတောင့်ကြုံခဲ စွယ်တော်ဖူးရဖို့ မလွယ်တော့ဘူးလေ။
ဘုရားဖူးတဲ့နေရာမှာ ထူးခြားချက်ကလေးကို တွေ့ရတယ်။ စွယ်တော်ဖူးဖို့ တန်းစီနေကြတဲ့လူတန်းကြီးဟာ
လေးဖက်လေးတန်အပြည့်ပေါ့။ လူပေါင်းသိန်းချီပြီးနေ့စဉ်လာကြတယ်။ အဲ့ဒီမှာ သူတို့ရဲ့ဝတ်စုံပေါ့သမီးရယ်။ သာမန်အချိန်မျိုးမှာ အ၀ါ အနီ အကြောင် အကြား တွေအ၀တ်များတဲ့ ဒီနိုင်ငံသားတွေဟာ ဒီနေရာမှာတော့ ထူးထူးခြားခြား အဖြူရောင် ၀မ်းဆက်အ၀တ်ကို သာဝတ်ကြတာတွေ့မြင်ရတယ်။ ဘယ်ကိုကြည့်ကြည့် အဖြူရောင်တွေပဲ လွမ်းမိုးနေတယ်။ သမီးဆီပို့တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာ မြင်ရမှာပေါ့။ သူတို့ဟာ ဆူညံမှုမရှိပဲနဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ငြိမ်သက်စွာပဲ တန်းစီကြတယ်။ လုံခြုံရေးကတော့ တော်တော်ကို တင်းကြပ်တယ်။ ခါတိုင်းဘယ်နေရာမျိုးကိုမဆို လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ အစစ်အဆေးမရှိသွားနိုင်ပေမဲ့ ဒီနေ့ ဒီနေရာမှာတော့ လူအားလုံးကို လုံခြုံရေးအရ ရှာဖွေပါတယ်။ ဘုန်းဘုန်းတို့ ကိုယ် အနှံ့ရှာတာပဲ သူတို့က ဘုန်းဘုန်းတို့ကိုတော့
တန်းစီမခိုင်းတော့ဘူး စွယ်တော်တိုက်ရှိရာကို သွားပြီး တိုက်ရိုက်ဖူးခွင့်ရတယ်။
ငါးနှစ်မှတစ်ကြိမ်ဖူးရတဲ့ ဒီစွယ်တော်ကို ဖူးချင်ကြလွန်းလို့ ညအိပ်ပြီးစောင့်ကြတဲ့ လူတွေဟာ တစ်ရက်ဖူးပြီးတာနဲ့ပြန် မသွားကြဘူး။ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ထပ်ခါထပ်ခါ တန်းစီပြီး
အကြိမ်ကြိမ်ဖူးကြတာကို တွေ့မြင်ရတယ်။ လူအချို့ကိုမေးကြည့်တော့ ၅ ကြိမ်ရှိပြီပြောတယ်။ အရမ်းအားရစရာကောင်းတာပဲ။ ဘုန်းဘုန်းနေတာက သူတို့နိုင်ငံရဲ့မြို့တော် ကိုလံဘို မှာလေ။ စွယ်တော်မြတ်ကတော့ ကန္ဒီဆိုတဲ့မြို့လေးမှာ ကိန်းဝပ်တည်ရှိတယ်ပေါ့။ စွယ်တော်ဖွင့်ပွဲနဲ့ကြုံတွေ့ရတာ ၀မ်းသာဖို့ သိပ်ကောင်းတယ်။ သူများတွေက ပြောတယ်။ သွားသာသွား ကြုံတောင့်ကြုံခဲပဲတဲ့ သီးခြားဘုရားဖူးလာရင် နောက်တပ်ငါးနှစ်စောင့်ရမှာ
လို့ပြောကြတယ်။ ဒါနဲ့ဘုန်းဘုန်းလည်း သွားဖို့စီစဉ်တာပေါ့။
ရထားနဲ့ သွားရင်လည်းရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘုန်းဘုန်းတို့က ကားအပြတ်ငှါးလိုက်တယ်။ အသွားအပြန် စားသောက်တာတွေအပါအ၀င် အားလုံးကုန်ကျငွေက ၁၁၀၀ ရူပီးကျတယ်။ တစ်ပါးအတွက်ပေါ့နော်။ အားလုံးဆိုရင်တော့
မြန်မာငွေ တစ်သိန်းကျော်လောက်ကုန်းမယ်ထင်တယ်။ ဘုန်းဘုန်းတို့က နေ့ချင်းပြန်သွားလိုက်တယ်။ ဒီနေရာမှာ ပြောစရာရှိလာပြန်ပြီသမီးရယ်။ ကိုလံဘိုမြို့တော်ကနေ တောတောင် လျိူမြောင်တွေဖြတ်သွားရတဲ့ ကားလမ်းမိုင်ပေါင်းများစွာဟာ အင်မတန် ကောင်းမွန်သပ်ရပ်နေတယ်။ လမ်းပေါက်တာ ပျက်စီးနေတာမတွေ့ရဘူး။ ထူးခြားချက်တစ်ခုကလည်း လမ်းမိုင်များစွာမှာ လူတွေစွန့်ပစ်ထားတဲ့ အမိုက်တွေ ကြွပ်ကြွပ်အိပ်လို စွန့်ပစ် အမိုက်တွေ ဘာမှ မတွေ့ရတာပါပဲ။ သူတို့က တောတောင်ရေမြေနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း အင်မတန် တန်ဘိုးထားကြတယ်။ သစ်တောစိမ်းစိမ်းတွေ နေရာတိုင်းမှာ ရှိတယ်။ ပိုပြီးတော့ အံသြစရာကောင်းတာတွေကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ပင်လည်ထဲက ကျွန်းနိုင်ငံလေးဖြစ်ပေမဲ့ ဘုန်းဘုန်းတို့နိုင်ငံက ရှမ်းတောင်တန်းကြီးတွေလို နောက်ရိုးမ
တောင်တန်းကြီးတွေလို ကြီးမားတဲ့ တောင် ရေမြေသဘာဝတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ ကန္ဒိဆိုတဲ့မြို့လေးဟာလည်း တောင်စောင်း တောင်ကုန်းတွေပေါ်မှာ တည်ထားတဲ့မြို့လေးဖြစ်တာမို့ အရမ်းသာယာတာပေါ့။ သိပ်သာယာတာပဲ။ အရမ်းလည်းအေးချမ်းတယ်။
ကန္ဒီကနေပြန်တော့ ဘုန်းဘုန်းဘ၀မှာ အရမ်းအဲ့သြခဲ့ရတယ်။ အရင် ဘုန်းဘုန်းက ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း သုဝဏ္ဏသျှံတောင် သာသနာပြုဌာနမှာတာဝန်ကျခဲ့တာ သမီးသိတယ်နော်။ အခုလေ အဲ့ဒီရှမ်းပြည်နယ်က ဘုန်းဘုန်းနေခဲ့ဖူးတဲ့ သုဝဏ္ဏသျှံတောင်တန်းကြီးနဲ့ ၉၀ ရာနုန်းတူတဲ့ တောင်တန်းကြီးကို မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဘလော့ ခေါင်းစီမှာ တင်ထားတဲ့ စိမ့်ညို့နေတဲ့ တောင်တန်းကြီးပေါ့ ပိုပီးထူးခြားတာက လေးဒေါင့် စပ်စပ်ကျနေတဲ့တောင်ထိပ်ပုံပါပဲ ဘုန်းဘုန်းဖြင့် အရမ်းအံ့သြတာပဲ။ တိုက်ဆိုင်မှုတွေလား ကံစီမံမှုတွေလားတောင် မပြောတတ်တော့ဘူး သမိးရယ်။ စွယ်တော်ဖူးချိန်ဟာ အင်မတန်အံသြဖို့ကောင်းတယ်
စွယ်တော်မဖွင့်ခင် ပူပြင်းလိုက်တဲ့နေဟာ ပြောစရာမရှိအောင်ပဲ စွယ်တော်လည်းဖွင့်ရော မိုးတွေအုန့်လို့ ကောင်းကင်မှာ တိမ်တွေထူထပ်လို့ ချက်ချင်းတက်လာတယ်။ ဘုန်းဘုန်းတို့ အပြန်ခရီးမှာတောင် မိုးရေးတွေရဲ့ကြားမှာ စိုစိုပြေပြေနဲ့ ပြန်ခဲ့ရတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သမီးရယ် အတွေ့အကြုံကောင်းတွေဆိုတာ နောင်တစ်ချိန် အသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်။ စားတွေဖတ်ရတာ ပျင်းနေပြီလား။ ဘုန်းဘုန်းက သမိးကိုရော မိသားစုအားလုံးကိုရော သတိရလွန်းလို့ရေးပို့တာနော်။ ဒိနေ့တော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်ထားဦးမယ် နောက်မှ ဆက်ရေးတာပေါ့နော်။
ကိုလံဘိုမြို့။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ။ ၂၀. ၃. ၂၀၀၉ 10-1. Am
Posted by suvannasan at 2:45 AM No comments:
ဒေးဒေး သို့ ပေးစာများ (၄)
အရင်စာထဲမှာ ဘုန်းဘုန်း ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက်နေ့ သီရိလင်္ကာကို ရောက်တယ်လို့ ရေးခဲ့တယ်နော်။ ၂၇ နေ့မှာပဲ ကျောင်းအပ်တယ်။ ကျောင်းလခအဖြစ် ရူပီး ၂၀၀၀နဲ့ ဒေါ်လာ ၆၀၀ ပေးရမယ်ပြောတယ်။ လောလောဆယ်တော့ ဒေါ်လာ ၂၀၀ ပေးခဲ့ရတယ်။ ကျန် ၄၀၀ ရာကို ကျောင်းတက်လို့နှစ်ဝက်ရောက်မှ ပေးချေရမယ်တဲ့ ဒီကိုထွက်လာတော့ မြန်မာနိုင်ငံက
သီရိလင်္ကာသံရုံးမှာ ခရီးသွားဗီဇာ ပဲလုပ်ခဲ့တာမို့ နေထိုင်ခွင့်က တစ်လပဲရတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီမှာ ကြာကြာနေပြီး
ကျောင်းတက်လို့ရအောင် ကျောင်းသားဗီဇာပြန်လုပ်ရတယ်။ ပထမဆုံး သူတို့နိုင်ငံက သံဃအဖွဲ့အစည်းထဲပါဝင်တဲ့ ဆရာတော် တစ်ပါးဆီက လက်မှတ် ၂၈ ရက်ညမှာရတယ်။ ၂၉ ရက်နေ့မှာ သူတို့ရဲ့သာသနာရေရုံးကိုသွားရတယ်။ သာသနာရေးရုံးက ထောက်ခံချက်ရပြီးနောက် အဲဒီနေ့မှာပဲ ဗီဇာလုပ်ဖို့ ဗီဇာရုံးကိုသွားပြီး လိုအပ်တဲ့ဖောင်တွေဖြည့်လို့ ပတ်စ်ပို့စာအုပ်ကို ပေးထားခဲ့ရတယ်။ ၃ ရက်ခွါချိန်းတယ်။ ဒါဆိုရင် ဗီဇာကိစ္စပြီးသွားသလိုပဲ ချိန်းတဲ့ရက် သွားယူလိုက်ရုံပေါ့။ အော် ဘုန်းဘုန်းက မြန်မာပြည်ကနေလာတာဖြစ်လေတော့ တစ်ခါတစ်ခါ မြန်မာတွေးတွေးနေမိတယ်။ တကယ့်ကိုပဲဝန်ထမ်းတွေအားလုံး သူ့အလုပ်သူလုပ် ပုံမှန်လည်ပတ်နေကြတာ အေးအေးဆေးဆေးပဲ ဘယ်လို စာရွက်စာတမ်းဖိုးမှ မကုန်ခဲ့ဘူး။ အရမ်းကို အံ့သြမှုနဲ့ ဟုတ်မှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့ တွေးနေမိတယ်။ သူတို့ရုံးတွေမှာ တစ်ပြားမှ မကုန်ပါဘူး သွားလာစရိတ်ပဲ ကုန်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ သူများတွေအတွက် မထူးခြားပေမဲ့ ဘုန်းဘုန်းတို့လို တင်းကြပ်တဲ့ တိုင်းပြည်ကလာတဲ့ လက်ဖက်ရည်ဖိုး အောက်ဆိုက်တွေပေးမှ လက်မှတ်တစ်ခုရတဲ့ တိုင်းပြည်ကလာတဲ့သူတွေအတွက်တော့ တကယ်ကိုရင်သပ်ရှုမောဖြစ်ခဲ့ရတာပဲလေ။
နောက် ၃ ရက်မှာ ပေးထားတဲ့ ပတ်စပို့စာအုပ် ပြန်ရတယ်။ တစ်နှစ်စာ နေထိုင်ခွင့်ရတယ်။ နောက်နှစ်ဆက်နေရင် ထပ်တိုးပေါ့။ ကျောင်းအပ်တာတွေ ဗီဖာသက်တမ်းတိုးတာတွေ ပြီးသွားပြန်တော့ တစ်နှစ်စာနေဖို့ အဆောင်ရှာရပြန်တယ်။ လောလောဆယ်တည်းနေတဲ့ာမြန်မာကျောင်းက နေရာအခက်အခဲတွေကြောင့် အမြဲနေဖို့မဖြစ်ဘူး နေလို့လည်းမရဘူး။ ဒါကြောင့် ကုလားကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ နေရာရတယ်။
အခန်းခ ရူပီး ၁၅၀၀ နဲ့ အင်တာနက်ကြေး ၆၀၀ ။ စားစရိတ် က ရူပီး ၂၅၀၀ပေးရတယ်။ အင်တာနက်က သုံးသုံးမသုံး ပေးရမှာ ဆိုတော့ မထုးဘူးဆိုပြီးသုံးဖြစ်တယ်။ မိန်းတက္ကသိုလ်ကြီးနဲ့ နီးပေမဲ့ ဘုန်းဘုန်းတို့ တက်တဲ့ဌာနက ကျောင်းကနေ သီးခြားထုတ်ထားတာဆိုတော့ သွားရတာ နေတဲ့ကျောင်းနဲ့က တော်တော်လှမ်းတယ်။ အသွားအပြန်
ကားစီးရတာ ၄ နာရီလောက်ကြာတယ်။ နောက်တော့ ကျောင်းနဲ့နီတဲ့နေရာ ပြန်ရှာရမှာပေါ့သမီးရယ်။ ကိုယ်အိပ်ဖို့ ကုတင်ကအစ၀ယ်ရတယ်။ သူတို့ကအခန်းသက်သက်ပဲပေးတာ။ နည်းနည်းဆင်းရဲပေမဲ့ တောင်တန်းသာသနာပြုသွားတဲ့ နှစ်တွေလောက် မပင်ပန်းပါဘူး။ နေရတာ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ အေးချမ်းတယ်ပေါ့သမီးရဲ့ နေရာသစ် ပတ်ဝန်းကျင်အသစ် ဆိုပေမဲ့ အင်မတန်ယဉ်ကျေးတဲ့ လူ့အသိုက်အ၀န်းထဲ ရောက်နေရတာမို့ တကယ့်ကိုပဲ ငြိမ်းချမ်းတယ်။ နေ့စဉ်တွေ့နေရတဲ့ လူမှုဝန်းကျင်မှာလည်း ပြဿနာမရှိသလောက်ပါပဲ။ တကယ်ကို အံ့သြစရာတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ တိုင်းပြည်တစ်ခုပါ။ လမ်းဘေးမှာ အချိန်ဖြုန်းနေတဲ့သူ မတွေ့ရသလို ယောကျာ်းမိန်းမ အားလုံးဟာ တကယ်ကို ယဉ်ကျေးမှုကြီး တစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ်၊ သိပ်အံ့သြလွန်းလို့ ဒီအကြောင်းတွေရေးဖြစ်တာပါ။
နေ့တော့ ဒီလောက်နဲ့နားမယ်ဒေးဒေးရယ်။ နောက်တစ်ပါတ်ဆို ၅ နှစ်မှ တစ်ကြိမ်ဖွင့်တဲ့ စွယ်တော်အကြောင်းနဲ့ အခြားသိသင့်တာလေးတွေ၊ နောက်ပီး နိုင်ငံတွင်း ဘုရာဖူးခရီးစဉ် အကြောင်းနဲ့ သူတို့ဆီက တောတောင်ရေမြေသဘာဝတွေကိုလည်းပြောပြမယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာတွေနဲ့ ပြည့်နက်နေပြီး သစ်တောတွေ ဘယ်လိုထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ထားလည်းဆိုတာတွေပေါ့။ စာရေးချင်ပေမဲ့ ဆန္ဒတွေ များနေလို့ ဘယ်ကစရေးရမှန်းမသိအောင်ကိုဖြစ်နေရတယ်။ ကဲ့ ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ နားကြမယ်နော် မနက်ဖြန် အတွေ့ကြုံသစ်တွေ ထပ်ရေးမယ်။ အမှန်တော့ ဘုန်းဘုန်းအတွေ့အကြုံတွေ နောက်ပိုင်းမှာ မှတ်တမ်းကျန်ရစ်စေချင်တာပါ။
ကိုလံဘိုမြို့။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ။ ၁၉. ၃. ၂၀၀၉ ၉း၄၉ Am
Posted by suvannasan at 9:13 AM No comments:
ဒေးဒေး သို့ ပေးစာများ (၃)
ဘုန်းဘုန်း ၂၀၀၈၊ ဖေဖ၀ါရီလ၊၂၁ ရက်နေ့က ကျောင်းစတက်တယ်။ အော် ကျောင်းဆိုလို့ ဘာကျောင်းမှန်းမသိဖြစ်နေဦးမယ်။ Sri lanka နိုင်ငံ၊ ကိုလံဘိုမြို့တော်က Kelaniya University ပါ။ မြန်မာပြည်မှာ B.A ဘွဲရတဲ့သူ၊ ဒါမှမဟုတ် ဓမ္မာစရိယအောင်မြင်ပြီးတဲ့သူတွေကို M.A ဘွဲတက်ဖို့ အသိအမှတ်ပြုပေးတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုန်းဘုန်းလည်း အဲဒီတက္ကသိုလ်မှာ M.A တန်းတက်ရောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လေ။ ဒါက ကျောင်း အကြောင်းကနေ စကားထွက်သွားတာပါ။ အမှန်ပြောချင်တာက အဲဒီမှာတွေ့ကြုံရတဲ့ အခြေအနေလေးနည်းနည်းကိုပေါ့။ ကျောင်းကိုဘတ်စ်ကားနဲ့သွားရတယ်။ နှစ်နာရီလောက်ကြာအောင်စီးရတယ်။ စာသင်ချိန်တွေက သူ့နိုင်ငံ ဘာသာစကားနဲ့ (ဆင်ဟာလီပေါ့လေ) လေ့လာသူတွေအတွက်တော့ မနက်ပိုင်းကနေ နေ့လည်ပိုင်း တစ်နာရီအထိသင်ရတယ်။ အင်္ဂလိပ် ဘာသာယူတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက် နေ့လည် ၂ နာရီမှစတက်ရတယ်။ ညနေ၆-နာရီမှကျောင်းဆင်းတယ်။ ကိုယ်နေတဲ့နေရာပြန်ရောက်တော့ ၈ နာရီထိုးနေပြီ။
နည်းနည်းပင်ပန်းတယ်။ အသွားအပြန်ဆိုတော့ တစ်နေ့ကို လေးနာရီလောက်စီးရတယ်။ အရမ်းပင်ပမ်းပေမဲ့ ဘုန်းဘုန်းပျော်တယ်။ အသားမကျသေးတဲ့ နေရာသစ်မှာဆိုတော့ အရာရာဟာ စမ်းတစ်ဝါးဝါးပေါ့။ ဒီလိုပုံနဲ့ ဆက်သွားလို့ အဆင်မပြေရင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပြီး ကားတစ်စီးတော့ စီစဉ်ဖို့စိတ်ကူးထားတယ်။ လောလောဆယ်တော့ အဆင်ပြေသလို ကြည့် သွားလိုက်တော့တယ်။ ဒီလို အခက်ခဲတွေ ရှိနေပေမဲ့လည်း စိတ်ထဲတော့ အေးချမ်းနေတယ် သမီးရယ်။ ဒီမှာနေရတာ စိတ်ထဲမှာ တော့အလိုလိုအေးချမ်းနေတယ်။ ဘာကြောင့်ရယ်တော့မပြောတတ်ဘူး။ ရောက်ခါစဆိုတော့ အမေ ကိုလည်းလွမ်းတယ်။ တီတီကြီးကိုလည်းသတိရတယ် သမီးတို့နဲ့ ခွဲခွါလာတာလည်းမကြာသေးတော့ ပိုပြီးတော့ သတိရတယ်ဆိုပါစို့။
၂၀ . ၂ . ၂၀၀၉၊ စနေညပေါ့။ ဘုန်းဘုန်းတို့ဆီမှာ ည ၉း၃၀ အချိန်၊ ခါတိုင်း မီးပျက်တယ်လို့ မရှိတဲ့ နိုင်ငံ ရုတ်တရက် မီးတွေပြတ်သွာားပြီး။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားတယ်။ တစ်ခုခုတော့ထူးခြားနေပြီဆိုတာ ရိပ်မိတယ်လေ။
ကိုလန်ဘိုတစ်မြို့လုံးမီးတွေအမှောင်ချထားတာ။ ဘာကြောင့်ပါလိမ့်ပေါ့။ နောက်တော့ တမိလ်သူပုန်တွေ လေကြောင်းက တိုက်မှာကို သတင်းရလို့ အမှောင်ချပြီးစောင့်တာလို့ပြောတယ်။ သိပ်မကြာဘူးသမီးရေ လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးစနစ်ကောင်းလေတော့ ဘုန်းဘုန်းတို့ခေါင်းပေါ်က ကောင်းကင်တစ်ခုလုံး သီတင်းကျွတ်မီးရူးပီပန်းပစ်သလိုပဲ ၀ုန်းဒိုင်းကျဲနေတော့တယ်။ ဘုန်းဘုန်းတော့ ဒီလိုမျိုး တစ်ခါမှလည်း မမြင်ဘူးတော့ စိတ်ထဲက နည်းနည်းကြောက်ပေမဲ့ အေးအေးဆေးဆေးပဲကြည့်နေလိုက်တယ်။ တစ်မြို့လုံးပြေးကြ လွှားကြနဲ့ အုန်းအုန်းကြွက်ကြွက်ညံနေတာပဲ ကောင်းကင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်။ လေယာဉ်ပစ်အမြောက်သံတွေလဲ ဆူညံနေတာပဲ။
ဘုန်းဘုန်းတော့ မကြောက်ပါဘူး။ အတွေ့အကြုံပေါ့။ မိနစ်သုံးဆယ်လောက်အချိန်အတွင်းမှာပဲ ရန်သူ လေယာဉ်နှစ်စင်ကို ပစ်ချနိုင်လိုက်တယ်တဲ့ သတင်းကြားရတယ်။ လုံခြုံရေးအရမ်းကောင်းတာပဲ။ ရန်သူဗုံးဖောက်လို့ ပြည်သူ ၂၈ ယောက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့လည်း ကြားရတယ်။ ဘတ်စ်ကားတွေလဲ မကြာမကြာဗုံခွဲခံရတယ်။ အစိုးရဘတ်စ်ကားပေါ့။ အနီရောင်ကားကြီးတွေ။ ဘုန်းဘုန်းတော့
အန္တရယ်ကင်းအောင်ဆိုပြီ။ အစိုးရဘတ်စ်ကားကိုမစီးဘူး။ တစ်ခြားကားတွေကိုပဲစီးတယ်။ ဘာမှ မစိုးရိမ်ပါနဲ့လို့ တီတီကြီးကိုပြောပေးနော်။ တကယ်တော့ ဒီနိုင်ငံမှာ ဘုန်းဘုန်းလတ်တလော ကြုံတွေ့ရတာတွေ အမှတ်တရရှိအောင်ဆိုပြီး ရေးလိုက်တာပါ။ စားဝတ်နေရေးမှာ ဆွမ်းကတော့ ကိုယ်တိုင်ချက်ရတယ်၊ သူများနိုင်ငံဆိုတော့ ကိုယ်နိုင်ငံမှာလို အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလေ။ အခုအခြေအနေကတော့ အဆိုးကြီးမဟုတ်တော့ဘူး။ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ နေသားတစ်ကျဖြစ်သွားမှာပါ။ ဒီကအခြေအနေလေးတွေ သိရအောင်လို့ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းလေးတွေပါ ပို့ပေးထားတယ်နော်။ စနေနဲ့ တနင်္ဂနေ့တွေလာရင် ဘုန်းဘုန်းနဲ့တွေ့နိုင်တယ်။
အခြားနေ့တွေဆို ကျောင်းမသွားခင် မနက်ပိုင်းလေးတော့တွေ့နိုင်တယ်လေ။ တစ်ခါမှ မမျှော်မှန်းထားတဲ့နေရာမှာ ပညာသင်ယူရတဲ့အခါ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ တီတီကြီးကို အရမ်းကျေးဇူးတင်မိတယ်။ သမီးနဲ့ စကားပြောဖြစ်တဲ့အခါလည်း ပြောပြလိုက်ဦးနော်။ ဘုန်းဘုန်းက အမြဲကျေးဇူးတင် အမှတ်တရရှိနေပါတယ်လို့……..။
သမိးရဲ့မေမေ ပြီးတော့ကြေးကြေးနဲ့ ဇူဇူအပါအ၀င် အားလုံးကိုသတိရပါတယ်ပြောပေးပါ။
Posted by suvannasan at 8:43 AM No comments:
ဒေးဒေး သို့ ပေးစာများ (၂)
အရင်တစ်ပတ်က စာဖတ်ရတယ်နော်၊ သမီးတို့ မမဇူတို့ စာမေးပွဲဖြေဖို့
ဘုန်းဘုန်းဆီ လာတဲ့အခိုက်ကာလတွေဟာ နိုင်ငံခြားက
စပွန်ဆာစောင့်နေတဲ့ အချိန်တွေဖြစ်တယ်လေ။ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကဏ္ဍကလည်း
အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ဒီနေရာမှာ ပြောပြဦးမယ်။ ဘုန်းဘုန်းနဲ့ခင်တဲ့
သူငယ်ချင်းတစ်ပါးက ပြည်ပကို အရင်ရောက်နှင့်တယ်။ သူက အခြေအနေတွေပြောပြတယ်။
လာချင်ရင်စပွန်ဆာပေးမယ်ပြောတယ်။ ဒါက အရင်က ခင်ခင်မင်မင်နေခဲ့ကြလို့ပေါ့။
သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းဆိုတာ အားလုံးအပေါ်မျှမျှတတ ပေါင်းရတယ်။
ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး ပေါင်းသင်းရတယ်။ ဒီလူနဲ့ပေါင်းလို့
နှစ်နာနိုင်တယ်ထင်ရင် ခပ်ခွါခွါပေါင်းပေါ့။ အကောင်းဆုံးက တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့
အပြုံးနဲ့နုတ်ဆက်တတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ နောက်ပြီး
ကိုယ်က အရင်ဦးအောင်နုတ်ဆက်ရတယ်။ ဒါတွေဟာ အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတွေပေါ့။
ထားပါတော့။ ပြောချင်တာက လူ့သဘာသပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းပါ။
သဘာဝတွေပဲပေါ့။ ဒီသဘာဝတွေကို လေ့လာထားရင် သဘာဝတွေနဲ့
လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတတ်ရင် သမီးအဆင်ပြေပြီပေါ့။ လူတွေရဲ့သဘာဝကို
သိလေလေ ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်လေလေပါ။ လူတိုင်းဟာ ညှင်သာပျော့ပြောင်းမှုကို
ကြိုက်ကြတယ်။ ကိုယ်က ချိုသာတဲ့စကားနဲ့ဆက်ဆံတာကိုလိုချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့
ကိုယ်လိုချင်ရင် ကိုယ်ကလည်းအဲ့ဒီလိုကျင့်သုံးမှရတယ်။ ကိုယ်ကတော့
ချိုချိုသာသာပြောမှကြိုက်တာ။ သူများကို ကိုယ်ကပြောတော့ နည်းနည်းတင်းမာနေရင်
သူများဘယ်သဘောကျမလည်းနော်။ ဒါကလဲ လူသဘာဝပါသမီးရယ်။ လူဆိုတာ အတ္တ ဆန်ကြတယ်။
သူ့ကိုယ်သူ ရှေ့တန်းတင်ကျတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရှေ့တန်းတင်ကျတဲ့
လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ သူများကို ရှေ့တန်းတင်သူတွေဟာ အောင်မြင်တာများတယ်။
လူမှာ စာနာမှုလိုအပ်တယ်လေ။ လုပ်စရာရှိရင် ရှေ့ကနေလုပ်။
အခွင့်အရေးကို နောက်မှယူ အဲ့ဒိလိုနေတတ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးနော်။ အရင်က
ဘုန်းဘုန်း မကြာမကြာ ပြောပြောနေတာ။ လူမှာ စာနာတတ်ရတယ်လို့ သူငယ်ချင်း
သို့မဟုတ် မောင်နှမတွေအများကြီးကြားမှာ စားသောက်စရာနည်းနည်းရှိတဲ့အခါ
ကိုက စာချင်တဲ့ဆန္ဒကို ချိုးနှိမ်ပြီး မစားပဲနေတာမျိုး။
ကြည့်ပြီး ကြည်နူတတ်အောင်ကြိုးစားရတယ်။ သူများပျော်ရွင်မှုတွေကို
ကြည့်ပြီးပျော်ရှင်တတ်လာရင် သူများအဆင်ပြေမှုကို ၀မ်းသာတတ်လာရင် ဘ၀ဟာအလိုလိုအဆင်ပြောလာလိမ့်မယ်။ ပါဠိစာပေမှာတော့ မုဒိတာ လို့ခေါ်တယ်လေ။
ဒီနေရာမှာ စကားသင့်တုန်း သမီးတို့လူနေမှုဘ၀မှာ
အမြဲကြားနေရတဲ့ ဒါနဆိုတာကို ဘုန်းဘုန်းပြောပြမယ်။ ဒါန= လှူတယ်။ ပေးတယ်။
ဆိုတာ ဒါနဆိုတဲ့ ပါဠိစကားလုံးကြောင့်ကြီးကျယ်နေတာ။ အမှန်တော့ ဒီဒါနဆိုတာ
ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ စတဲ့ မြင့်မြတ်သူတွေကို လှူမှ ဒါနမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါနဆိုတာ ကိုယ့်ဆီမှာရှိတဲ့ ပြည့်စုံမှုတွေကို
မပြည့်စုံသူတွေနဲ့ မျှသေခံစားခြင်းလို့ ဘုန်းဘုန်းတော့ ဖွင့်ဆိုတယ်။
ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ ပိုလျှံမှုတွေထဲက မပြည့်စုံသူတွေနဲ့ မျှဝေခံစားတတ်ရင်
အဲ့ဒီလူဟာ ဒါနနဲ့နေတဲ့သူပေါ့။ ကှိုဆီကပိုလျှံတဲ့ အစားအစာနဲ့ အခြားလိုအပ်မဲ့ အရာတွေကို မျှဝေသုံးစွဲစမ်းပါ စိတ်ချမ်းသာမှုတွေ ရလာလိမ့်မယ်။ အောက်ထစ်ဆုံး
ခွေးကြောင်စတဲ့ သတ္တ၀ါလေးတွေကို စိတ်ကောင်းကောင်နဲ့မျှဝေတာဟာလည်း ဒါနပဲပေါ့။ ကိုယ်အသုံးမလိုတော့တဲ့
အ၀တ်ဟောင်းတွေကို ကိုယ့်လောက်မရှိတဲ့ လိုအပ်တဲ့ ဆင်းရဲနေတဲ့ ကလေးတွေကို
စိတ်ထားဖြူစင်စွာနဲ့ မျှဝေပေးတာဟာလည်း ဒါနပဲပေါ့။ ဒီနေရာမှာ စိတ်ထားက
အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ အမှန်တကယ်သူတို့လေးတွေ အဆင်ပြေပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့
ပေးဖို့လိုတယ်။ ကိုယ်က အသုံးမြ့ပုတော့တဲ့ အ၀တ်အထည်ဟောင်းလေးတွေကို
လိုအပ်တဲ့ ကလေးတွေကိုပေးလိုက်လို့ သူတို့လေးတွေ
ဘယ်လောက်ပျော်ရွင်ကြမလဲဆိုတာကို ကြည့်ပြီး သူတို့ ၀မ်းသာလေလေ ကိုလည်း
ကြည်နူးမှုများများဖြစ်ရလေပဲလေ။ သူတို့ပျော်ရွှင်တာကို ကြည့်ပြီး
ကြည်နူးရတဲ့ကိုယ့်စိတ်ဟာ ကိုယ်ကိုတိုင်း ရယူလိုက်ရတဲ့
ကြည်နူးမှုနဲ့မတူပါဘူး။ သူများပျော်တာကို ၀မ်းမြောက်တတ်တဲ့ ကြည်နူးမှုက
ပိုပြီးတော့ လေးနက်တယ်။ ဒါကို မုဒိတာ လို့ခေါ်တယ်သမီးရယ်။
ဒိနေရာမှာ သမီးအဓိကမှတ်ရမှာက ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်
အလျော့ပေးပြီးဆက်ဆံပါ။ မိသားစူတွေကို စာနာပါ။ ဒါနဆိုတာ ပြည့်စုံမှုတွေကို
မပြည့်စုံသူတွေနဲ့ မျှဝေခံစာခြင်းဖြစ်တယ် ဆိုတာမှတ်ထားနော်။
ကိုလံဘိုမြို့။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ၁၇. ၃. ၂၀၀၉ ၁၀း၄၇ Am
Posted by suvannasan at 8:33 AM No comments:
ဒေးဒေး သို့ ပေးစာများ (၁)
နိုင်ငံခြားကို သွားဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့
တွေ့ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲတွေ ခရီးသွားမှတ်တမ်းတွေ အတွေထွေ ဗဟုသုတတွေကို
ရေးမှာပါ သမီး စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဘုန်းဘုန်း
ဘုန်းဘုန်းက နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိတက္ကသိုလ်ကနေ ၂၀၀၄- ခုနှစ်မှာ
စတုတ္ထနှစ်အောင်မြင်တယ်။ အလုပ်သဘောအရ ကျောင်းပြီးတဲ့နှစ်မှာ ဘွဲမယူရပါဘူး။
တောင်တန်းသာသနာပြု ၂ - နှစ်သွားရတယ်။ တြိဂံတိုင်းခေါ်တဲ့
သံလွင်မြစ်ရဲ့အရှေ့ဖက်ကမ်း မိုင်းပြင်မြို့နယ်က သုဝဏသျှံ သာသနာပြဌာနမှာ
တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတယ်။ ဆိုလိုတာက သမိးရယ်၊ ပညာရေးလောကနဲ့ ၂
-နှစ်ကင်းကွာသွားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုပါ။ ကျောင်းပြီးပြီးချင်း နိုင်ငံခြားကို
ထွက်ချင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အချိန်ရယ် ငွေရယ်က အဆင်မပြေခဲ့ဘူးလေ။
၂၀၀၆ - ခုနှစ်မှ ဘွဲ့ယူရတယ်။ ဘွဲ့ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့
စိတ်တွေက လေလွင့်နေတယ်။ ပညာရေးဘက်လိုက်ရမလိုလို
တရားဘာဝနာပွါးများရမလိုလိုနဲ့ ယောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေတယ်လေ။ ဒီလိုနဲ့
မန္တလေးမှာ ၂ -နှစ်ထပ်နေပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာတယ်။ ဒီ
၂-နှစ်မှာ အဆင်ပြေရင်နိုင်ငံခြားသွားမယ်။ မပြေလည်ခဲ့ရင် အေးအေးဆေးဆေး
ဇာတ်မြုပ်လို့ လူတွေနဲ့ဝေးတဲ့ တောကျောင်းလေးမှာ
ကွန်ပျုတာသင်တန်းတွေတက်တာ ၂၀၀၇ -တစ်နှစ်လုံးလိုလိုပဲ။ ကံဆိုးချင်တော့
အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားမှုတွေ မပြီးခင် စက်တင်ဘာ သံဃာ့အရေးအခင်းဖြစ်တော့
ဆက်လက်လေ့လာခဲ့တယ်။ ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာလေးတစ်ခုစိတ်ထဲရောက်လာတယ်။
တစ်ချို့က ဘုန်းဘုန်းဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာ မသိကြဘူး။ လူအများရဲ့အမြင်မှာတော့
ရတနာပုံကျောင်းမှ ဧည့်သည်တွေကို ဆေးရုံဆေးခန်းပို့ပေးရ၊ ဘုရားဖူး လိုက်ပို့ပေးရ၊ ဆွမ်းအတွက် မီးဖိုချောင်မှာ ချွေးတစ်လုံးလုံးနဲ့ ကိုယ်အတွက် ဘာမှမယ်မယ်ရရမလုပ်နိုင်ပဲ
အချိန်ကုန်နေတဲ့သူတစ်ယောက်လို့မြင်ကြ မလားမသိဘူး။ နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့
အမှန်တကယ်နုတ်ဆက်တာတောင်မှပဲ မဖြစ်နိုင်တာတဲ့ စာမသင်ပဲမီးဖိုချောင်မှာ
နေတဲ့သူ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ အချိန်ကုန်နေသူက နိုင်ငံခြားသွားမယ်တဲ့ မနောက်စမ်းပါနဲ့တဲ့ပြောကြတယ်။
ဘုန်းဘုန်းက သူများတွေမသိအောင် လေ့လာသင်ယူထားတာတွေကို သူတို့မှမသိကြပဲ။
စိတ်ဆိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဖူးသမီးရယ်။ လူဆိုတာ လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ
အဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့ အမြဲပြင်ဆင်ထားရတယ်ဆိုတာကိုပါ။ နောင်တစ်ချိန်ကိုယ့်ကို
သူများက လိုအပ်လာတဲ့အချိန်ကျမှ သင်နေလို့မရတော့ဘူး။ ကိုယ်က
အဆင်သင့်ရှိနေနှင့်အောင် ပြင်ဆင်ထားရတယ်။ ဒါကိုပြောချင်တာပါ။
သမိးတို့လဲ အသုံးမ၀င်သေးဘူးဆိုပြီ မနေပါနဲ့ အချိန်ရရင်
အင်္ဂလိပ်စာ၊ ကွန်ပျူတာနဲ့ အခြားတတ်သင့်တာတွေကို လေ့လာထားပါနော်။ အခုဆိုရင်
အလိုလို ဖြစ်သွားရတာပဲလေ။ ကြိုးစားမှုကို အခြေခံရတယ်။
စိတ်ကောင်းကောင်းထားရတယ်။ ဘုန်းဘုန်းဆိုရင် သမီးတို့မြင်မလားမိဘူး။
ကျောင်းကိုလာတဲ့ သူအားလုံးအပေါ်စေတနာလည်းထားတယ်။ ကျွေးစရာရှိကျွေးတယ်။
အတူးသဖြင့်တော့ စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပေးရတယ်။ လူဆိုတာ ပညာတတ်ရုံ။
လူငယ်လေးတွေကို လူငယ်အခွင့်အရေးလေးတွေနဲ့ လိုက်လျောပေးရတယ်။
၁၆ . ၃ . ၂၀၀၉
Posted by suvannasan at 7:02 PM No comments:
သင့်တော်ရာလေးတွေကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် တင်သွားပါမယ်။ အင်တာနက်ရတဲ့နေရာရောက်နေရင်ပေါ့။ အကြံဥာဏ်လေးတွေလည်း ရေးသားပေးကြပါနော်။ suvannasan@gmail.com အားလုံးအေးအေးချမ်းချမ်းရှိကြပါစေ။
ရွှေအိုး မြန်မာ၊ နိုင်ငံခြား၊ သီးချင်း၊ရုပ်ရှင်
ကိုဇော် 357 ၏စိတ်ကူးများ
1. ကွန်ပျူတာနည်းပညာ အပိုင်းအစများ(၁)
၈။ နိရုတ္တိဒီပနီပါဌ်နိဿယ နံအကျဉ်း
၅၃။ ပဓာနသုတ် ပါဌ်နိဿယ
ခင်ဆွေဦး - တို့တိုင်းဌာနီ
မမလေး(ဂျာနယ်ကျော်) - မေ့အိပ်မက်
မမလေး(ဂျာနယ်ကျော်) - မုန်း၍မဟူ
မမလေး(ဂျာနယ်ကျော်) - သွေး
မစန္ဒာ - ငြိုးမာန်ဖွဲ့သူရယ်
ဒီစာအုပ်တွေဟာ တိုက်ရိုက်ဖတ်လို့ရပါတယ်။ ကံချွန် - အပျိုစင်တို့သိဖို့ ယောက်ျားတို့အကြောင်း (၂)
ကံချွန် - အပျိုစင်တို့သိဖို့ ယောက်ျားတို့အကြောင်း (၃)
ကံချွန် - အင်တာဖျီးနှင့် ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်
ကံချွန် - မန္တလေးမြို့က လူတွေအကြောင်း
ကံချွန် - ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟာသ၀တ္ထုတိုများ
ကံချွန် - ကြားဖူးနားဝ ဟာသပုံပြင်များ (၁)
ကံချွန် - ဒါကဒီလိုရှိတယ် ဟိုဟာက ဟိုလိုရှိတယ်
ကံချွန် - ဒိုးဒိုးဒေါက်ဒေါက်ဟာသများ
ကျော်ဝင်း - စိန်ခေါ်ကြသူများ
ချစ်စံဝင်း - တော်ဝင်စံထား မိန်းမသား
ချစ်ဦးညို - အီဂျစ်နဲ့အင်္ဂလန် နိုင်ငံခြားကို မောင်သွားထားလေမလား
ချစ်ဦးညို - ရုက္ခစိုးမာယာနှင့်အခြားပြိတ္တာများ
ချစ်ဦးညို - ရာဇကုမာရ
ချစ်ဦးညို - ၀ိဇိတာဝီ
ချစ်ဦးညို - ၀ိသာခါနှင့်သီတာ
ချစ်ဦးညို - စက္ကရုနှင့်ဘဒ္ဒါ
ချစ်ဦးညို - ရှင်စောပု
ချစ်ဦးညို - မဏိစန္ဒာ
ချစ်ဦးညို - လင်္ကာဒီပချစ်သူ
ချစ်ဦးညို - လောကဓံနှင့်လမ်းလျှောက်အတူထွက်ခြင်း
ချစ်ဦးညို - နေမင်းလမင်းသိန်းရာထောင်
ချစ်ဦးညို - ချစ်သောပါဒဧကရီ
ချစ်ဦးညို - ချစ်သူမင်းနန္ဒာ
ချစ်ဦးညို - ဒေ၀စ္ဆရာနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
ချစ်ဦးညို - ယာဇ
ချစ်ဦးညို - စာမရီသို့ထူးထူးခြား
ချစ်ဦးညို - မဏိစန္ဒာဥဒါန်း
ချစ်ဦးညို - မဟာသေနာပတိ
ချစ်ဦးညို - အစိရ၀တီကုဏ္ဍလကေသာ
ချစ်ဦးညို - သမိုင်းမတွင်ပေမဲ့ သမိုင်းဝင်နေတဲ့စကားများ
ဆောင်းဝင်းလတ် - ဆူးကလေးကစူးတယ် ခူးမယ်
ပြည့်မှူးအိမ် - ကျူးပစ်(ဒ်)၏ရင်ဖွင့်မြား
ပြည့်မှူးအိမ် - သတ္တမမြောက်နတ်သမီး
ပြည့်မှူးအိမ် - ခြံခုန်တဲ့ကြယ်
ပြည့်မှူးအိမ် - အချစ်ရဲ့နက္ခတ်
ပြည့်မှူးအိမ် - ရင်ခွင်အတွက်နှင်းစက်အနမ်း
ပြည့်မှူးအိမ် - ချစ်သူကိုယ်တိုင်သွန်းခတ်ခဲ့သောသစ်သီးများ
ပြည့်မှူးအိမ် - မိုးရထားပေါ်က လက်ပြတဲ့ကောင်မလေး
ပြည့်မှူးအိမ် - မိုးကောင်းကင်ကိုလှည့်စားတဲ့ကြယ်
ပြည့်မှူးအိမ် - အချစ်ကြက်ခြေမခတ်ကြေး
မဟာဆွေ - အင်္ကျီပါး
မဟာဆွေ - သူပုန်ကြီး
မဟာဆွေ - စာရေးကြီး
မင်းခိုက်စိုးစံ - ဖိုးသူတော်ပြောသောပုံပြင်
မင်းခိုက်စိုးစံ - ချောင်းကြည့်တတ်သူတစ်ယောက်ရဲ့ည
မင်းခိုက်စိုးစံ - စိုမှာစိုးလို့ မိုးမိတယ်
မင်းခိုက်စိုးစံ - ခေတ်သစ်တစ်ခု၏အစ၊ အဓိပ္ပါယ်များ၏အဆုံး
မင်းခိုက်စိုးစံ - သုည
မင်းခိုက်စိုးစံ - ဂျစ်ပစီတစ်ယောက်ရဲ့ရင်ကွဲပက်လက်လမ်းဆုံ
မင်းခိုက်စိုးစံ - ကော်ဖီည
မင်းခိုက်စိုးစံ - ကလေးအတွေး (၇)
မင်းလူ - သင်္ခါရများ
မင်းလူ - ခေါင်းလောင်းထိုးသောဝတ္ထုတိုများ
မင်းလူ - အချစ်ဟု အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်ခြင်းမရှိစေရ
မင်းလူ - ငိုအားနှင့်ရယ်အား
မင်းလူ - ခြေစစ်ပွဲများ
မင်းလူ - အဖွားကြီးသုံးယောက်နှင့်စကားပြောခြင်း
မင်းလူ - ဒေ၀တာမြို့တော်
မင်းလူ - စိန်အလွမ်း
မင်းလူ - အီးကော်လာ
မင်းလူ - လေထန်ဖုန်း
မင်းလူ - ဥာဏ်စမ်းပုစ္ဆာ
မင်းလူ - ဖူးစာရှင်ကိုရွေးတော့မည်
မင်းလူ - ပြတိုက်ထဲက ပြဇာတ်
မင်းလူ - ငါးလေးတစ်ကောင်ဖမ်းမိတယ်
မင်းလူ - ချစ်များရှင်အစချစ်မြားရှင်အဆုံး
မင်းသိင်္ခ - မြနန်းနွယ်
မင်းသိင်္ခ - မိုးနဲ့မြေ
မင်းသိင်္ခ - မ- တတ်ပါ့
မင်းသိင်္ခ - မနောမယမြသက်လယ်
မင်းသိင်္ခ - မနောမယ ကိုပီတာ
မင်းသိင်္ခ - မြိုင်ဟေ၀န်
မင်းသိင်္ခ - ပုဏ္ဏားဘကွန်း (၁)
မင်းသိင်္ခ - ပုဏ္ဏားဘကွန်း (၂)
မင်းသိင်္ခ - တစ်ပွဲစားဦးနှော အပါအ၀င် အခြားဝတ္ထုတိုများ
မင်းသိင်္ခ - ဆားပုလင်းနှင်းမောင်နဲ့မြိုင်မဟာမမြလေး
မင်းသိင်္ခ - ပေတလူ
မင်းသိင်္ခ - ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် မောင်ဘချစ် အပိုင်း( ၁)
မင်းသိင်္ခ - ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် မောင်ဘချစ် အပိုင်း (၂)
မင်းသိင်္ခ - မအောင်ရင်
မင်းသိင်္ခ - မင်းဖြူမှန်မှန်ပြော
မြသန်းတင့် - လာခြင်းကောင်းသောအရှင်
မြသန်းတင့်၊ထက်အောင် - သမိုင်းစကားပန်းစကားနှင့် အခြားရသစာတမ်းများ
မြသန်းတင့် - လက်ဖက်ရည်ဆိုင်
မြသန်းတင့် - ဂျူပီတာဖိုက်
မြသန်းတင့် - ကြာညိုနံသင်းသောရေ၀တီမ
မြသန်းတင့် - ဓားတောင်ကိုကျော်၍မီးပင်လယ်ကိုဖြတ်မည်
မြသန်းတင့် - မှောင်မိုက်မှာငို
မြသန်းတင့် - တိမ်းရှောင်သူ
မြသန်းတင့် - ဧကရီဖွားစော
မြသန်းတင့် - မှော်ရုံတော်မှာမောလှပြီ
မြသန်းတင့် - စာရေးခြင်းအတတ်ပညာ
မြသန်းသင့် - လမင်းကိုထရံပေါက်မှချောင်း ကြည့်ခြင်း
မြသန်းတင့် - သြဂုတ်တစ္ဆေ နှင့်အခြားဝတ္ထုတိုများ
မြသန်းတင့် - ရေပွက်ပမာ
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - ညီမလေးရယ်စိုးရိမ်မိတယ်
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - မောင်ဘ၀ ညအလားကွယ်
တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် -ဝသန်လေချိန်မှန်ကူး
တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင်- ရှားလော့ဒေ၀ီနှင့် ဘာသာပြန်ကဗျာများ
တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် - ပညာရဲ့သဘော
တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် - တန်ခူးလေနှင့်လျောတော့သည်
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - မိုးတွေရွာမှဖြစ်လျှင်ကွယ်
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - နှင်းငွေ့တစ်ထောင့်မိုးတစ်မှောင့်
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် - လွမ်း
တာရာမင်းဝေ - ကျွန်တော်နဲ့ဧဒင်ကခြေသည်
တာရာမင်းဝေ - အရှေမြို့ရိုးကမိုးရေစက်များ
တာရာမင်းဝေ - ရွှေဖိနပ်မှာအစိမ်းရောင်ကြက်ခြေခတ်နဲ့ကောင်မလေး
တာရာမင်းဝေ - ပြိုင်မြင်းတို့ရဲ့ခွါသံ
တာရာမင်းဝေ - ကိုယ့်လက်နဲ့ဖမ်းမိတဲ့နဂါးငွေ့တန်း
တာရာမင်းဝေ - ကောင်းကင်အကြွေကောက်တဲ့လက်
တာရာမင်းဝေ - မှော်ဆရာရဲ့ကျောင်းစာအုပ်
တာ၇ာမင်းဝေ - ကျွန်တော်နဲ့ကြယ်မြင်လမြင်လောကဓံ
တာရာမင်းဝေ - သင်နှင့်နံနက်ခင်းကိုသာဝင်ခွင့်ပြုမည်
တာရာမင်းဝေ - ကျွန်တော်နဲ့ကြေးသွန်းယဉ်ကျေးမှု
တာရာမင်းဝေ - ကိုးမရှိတဲ့န၀င်း
တာရာမင်းဝေ - လရောင်ကိုပန်၍ ညယံ၌လည်းမွေးမွေးဖြူနိုင်ကြပါစေ
တာရာမင်းဝေ - ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပုရပိုက်
တာရာမင်းဝေ - ရှူး
တာရာမင်းဝေ - သူအိုးပုတ်လေးကျွန်တော်ပြန်ပေးပါ
တာရာမင်းဝေ - ပင်လယ်အတုထဲကကျွန်း
ဒဂုန်ရွှေမျှား - ရုပ်တုကျိန်စာ
ဒဂုန်ရွှေမျှား - ရွှေစင်နတ်ဘုရား
ဒဂုန်ရွှေမျှား - ရောဘ့်ဘင်ဆင်ကရူဆိုး
ဒဂုန်ရွှေမျှား - သုံးဖော်ညီနောင်
ဒဂုန်ရွှေမျှား - စောရသက်ပြင်း
ဒဂုန်ရွှေမျှား - ငယ်ကချစ်အနှစ်တရာ
ဒဂုန်ရွှေမျှား - လုသစ်ပင်နှင့်ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ်ဝတ္ထုများ
ဒဂုန်ရွှေမျှား - ကျွန်မင်းသား
ဒဂုန်ရွှေမျှား - ကမ္ဘာကိုကိုင်လှုပ်သူ
ဒဂုန်ရွှေမျှား - ကမ္ဗလာနီအောက်ဝယ်
ဒဂုန်ရွှေမျှား - ထောင်မင်းသားဦးဘိုးထော်
ဒဂုန်ရွှေမျှား - အီဂျစ်ဘုရင်မာယာရှင်
ဒဂုန်ရွှေမျှား - ချစ်သွေးဧကရီ
ဒဂုန်ရွှေမျှား - ဘ၀မုန်တိုင်း နှင်းမုန်တိုင်း
ဒဂုန်ရွှေမျှား - မေ၀ါ၏ကလဲံ့စား
နန္ဒ - လေးရူးသုန်သုန်
နီကိုရဲ - ပန်းပွင့်ကိုဖယ်ကြည့်မှမြင်ရမဲ့လမင်း
နီကိုရဲ - နှလုံးသားထဲကြွက်ဝင်နေသည်
နီကိုရဲ - လှည့်စား
နီကိုရဲ - အိုးလေး
နတ်နွယ် - ကမ္ဘာ့စာပေတစေ့တစောင်း
နတ်နွယ် - ရတနာလှိုဏ်ဂူ
နတ်နွယ် - မိုဗစ်ဗီးယား၏ အတိုင်းအတာနဲ့အခြားဝတ္ထုတိုများ
နတ်နွယ် - ရေအောက်တစ္ဆေ
နတ်နွယ် - အလည်လာတဲ့မိန်းကလေးရယ်
နတ်နွယ် - မင်းမှာသစ္စာလူမှာကတိ
နတ်နွယ် - ဒက်ဇယ်လာ
နွမ်ဂျာသိုင်း - တစ်မျိုးညာနွဲ့သွေမဖယ်စိုးပါနဲ့မေရယ်
ရွှေဥဒေါင်း - ဆော်လမွန်သိုက်
ရွှေဥဒေါင်း - သူရဲကောင်းသုံးယောက်အပိုင်း၁
ရွှေဥဒေါင်း - သူရဲကောင်းသုံးယောက်အပိုင်း၂
ရွှေဥဒေါင်း - သူရဲကောင်းသုံးယောက်အပိုင်း၃
ရွှေဥဒေါင်း - ဆင်စွယ်မင်းသမီးအပိုင်း ၂
ရွှေဥဒေါင်း - ဗတ်စကာဗျီလ်ခွေးကြီးအပိုင်း ၁
ရွှေဥဒေါင်း - ဗတ်စကာဗျီလ်ခွေးကြီးအပိုင်း ၂
ရွှေဥဒေါင်း - ရတနာပုံ
ရွှေဥဒေါင်း - အတွေးအမြင်နှင့် ရှူထောင့်
ရွှေဥဒေါင်း - တသက်တာမှတ်တမ်းနဲ့အတွေးအခေါ်များ
ရွှေဥဒေါင်း - မြသက်မော်
လယ်တွင်းသားစောချစ် - ပန်းများပွင့်စေမွှေးစေသူ
ဆရာပေါင်းစုံ - ၀တ္ထုတိုများ
ဝေမူးသွင် - ၀တ်မှုန်ကူးတဲ့ကြယ်
ဝေမူးသွင် - စိတ်ကောက်နတ်သမီး
ဝေမူးသွင် - ကျူးပစ်ဒ်ကိုတိုင်မသိတဲ့ မြားတစ်စင်းအကြောင်း
ဝေမူးသွင် - သံယောဇဉ်ဖတ်စာ
ဝေမူးသွင် - လူပျောက်ကြော်ငြာ
ဝေမူးသွင် - တစ်ခါတစ်ရံများ
ဝေမူးသွင် - ချစ်သူပြောတဲ့တနင်္ဂနွေပုံပြင်
ဝေမူးသွင် - စက္ကုပန်းတွေရဲ့သီချင်း
ဝေမူးသွင် - အသဲကွဲလူရွင်တော်
ဝေမူးသွင် - အဆင့်မြင့်ချည်တိုင်
သုခ - ဒီဆောင်းဟေမာန်
သုခ - ဂုဏ်ရည်မတူလို့လား
သိပ္ပံမောင်ဝ - အဟိတ်…၀တ္ထုဇာတ်လမ်းများ
သိပွံမောင်ဝ - စစ်အတွင်းနေစဉ်မှတ်တမ်း
အကြည်တော် - ယ္ခောမနဲ့တစ်ထောင့်တစ်ည
အကြည်တော် - ကျွန်တော်ချစ်သူပြောပြတဲ့သူချစ်သူအကြောင်း
အကြည်တော် - ဆွေတစ်ရာမောင်တစ်ကျိတ်
အကြည်တော် - သဲလှည်း
အကြည်တော် - အိမ် အပိုင်း(၁)
အကြည်တော် - အိမ်အပိုင်း(၂)
အကြည်တော် - အိုင်အိုဒင်းကိုကိုကြီးနှင့်
အကြည်တော် - ရီတန်းအောဖ့်ဘီလုး
အကြည်တော် - ကျွန်တော်ထောင်းသောပေါင်များ
အကြည်တော် - ပိုးကောင်များ
အကြည်တော် - မိုးတိ်မ်ပုံပြင်
အကြည်တော် - အိမ်မက်အပိုဒ်ခွဲ ၉
အကြည်တော် - တောသားကြီး
အကြည်တော် - တခါက ..ငယ်ငယ်လေးတွေ
အကြည်တော် - ကဝေပျိုနိဒါန်း
အကြည်တော် - ကျောက်သင်ပုန်းတွေမိုးထားတဲ့အိမ်
အကြည်တော် - ပြုတ်ထွက်သွားသောကျောရိုးဆစ်လေးများ
အကြည်တော် - နတ်နေကိုင်း
အကြည်တော် - ရွှေမိုးသည်း
အကြည်တော် - ခင်မှုန်မင်္ဂလာဆောင်
အကြည်တော် - ဟဒယတက်ကျမ်း
အကြည်တော် - ဇော်က .ကနေသည်
အကြည်တော် - နတ်ပြည်နံနက်ခင်း
အကြည်တော် - ဘီလူး
အထင်ကရ - မင်းနဲ့ကိုယ်
အထင်ကရ - ကောင်လေးချစ်တဲ့သူ
အထင်ကရ - သူဖန်ဆန်းတဲ့သင်္ကြန်
အီကြာကွေး - တွေ့ရကြုံရရှတတလေးတွေ
အီကြာကွေး - နတ်ရူးတို့ကြောင်နိုင်ပါပေ
ကလျာ - ဆောင်းဆည်းဆာ
ကြည်အေး - မီ
ကြည်အေး - အပြင်ကလူ
ကြည်အေး - နွမ်းလျအိမ်ပြန်
ကြည်အေး - ကျွန်မပညာသည်
ဒဂုန်တာရာ + ကြည်အေး - စမ်းမြညတစ်ည
ခင်ခင်ထူး - ဆံရစ်ဝိုင်း ၀တ္ထုတိုများ
ခင်မျိူးချစ် - ကိုင်းပြောလိုက်စမ်းမယ် သောင်းပြောင်းထွေလာ
ခင်မျိုးချစ်ဂျူနီယာဝင်း - ဆယ်နှစ်လရာသီပန်းများနှင့်ပွဲတော်များ
ခင်ဆွေဦး - ဒို့တိုင်ဌာနီ
ခင်နှင်းယု - လာခြင်းကောင်းသောလူကလေး
ခင်နှင်းယု - မွှေး
ခင်နှင်းယု - ဘယ်သို့သောအကြောင်းကြောင့်
ဂျာနယ်ကျော်မမလေး - သွေး
ဂျာနယ်ကျော်မမလေး - မုန်း၍မဟူ
ဂျာနယ်ကျော်မမလေး - အဖြူ
ဂျာနယ်ကျော်မမလေး - မေ့အိမ်မက်
ဂျာနယ်ကျော်မမလေး - ပျိုလေးတို့အိမ်ခေါင်မိုး
ဂျူး - ရာဇ၀င်ထဲမှာမောင့်ကိုထားရစ်ခဲ့
ဂျူး - ကံကြမ္မာကိုမယုံကြသူများ
ဂျူး - ကျွန်မ၏သစ်ပင်
ဂျူး - ကြယ်ကြွေတို့အတောင်ပံ
ဂျူး - ကျွန်မချစ်တြဲ့မို့တစ်မြို့
ဂျူး - ချစ်သူရေးတဲ့ကျွန်မ၏ည
ဂျူး - မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟ၀န်ခံချက်
ဂျူး - ကြယ်စင်တံတားကမ်းပါးနှင်ြး ဖူ
ဂျူး - ရဲရင့်သော နှလုံးသား
ဂျူး - တွေ့ချင်လှပြီ
ဂျူ - အ၀ါရောင်ရထား
ဂျူး - ရေမျောသီး
ဂျူး - ဖျားနေတဲ့မြို့
ဂျူး - နာမည်နဲ့အသက်
ဂျူး - မိန်းမနှစ်ယောက်
ဂျူး - အနှပညာရှင်များနဲ့စံလက်ရာများ
ဂျူး - လေထဲမှာကပျံဝဲကျသူများ
ဂျူး - ကောင်းကင်မပါသောည
ဂျူး - သူတို့တွန်းအားကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်မိသွားတာပါ
ဂျူး - မြရဲ့လ
ဂျူး - မတော်တရော်
ဂျူး - ပြတင်းပေါက်
ဂျူး - ကမ္ဘာမြေရဲ့ချစ်သူ
ဂျူး - ဘ၀ဇာတ်စရာ
ဂျူး - ငါးမျှားခြင်း
ဂျူး - လူနဲ့ကြိုး
ဂျူး - ၀တ္ထုတိုများ
ဂျူး - ရွက်လှေများ
ဂျူး - ပင်လယ်နဲ့တူသောမိန်းမများ
စမ်းစမ်းနွဲ့(သာယာဝတီ) - နေပန်းပွင့်ရဲ့ အပြာရောင်စာမျက်နှာသစ်
စိုးမြတ်သူဇာ - ခံစားမှု ၃၅
စိုးမြတ်သူဇာ - အနားသတ်သစ္စာ
ဆွေဆွေအောင် - လွယ်အိတ်ကလေး
ဆွေဆွေအောင် - လူညာကြီး
ညိုနှင်းအိမ် - အိမ်မက်ပန်းအလွမ်းနှင်းဆီ
မချိူမော်+ချစ်စံဝင်း - ဒေါင်းဖတ်စာပုံပြင်များ
မစန္ဒာ - မနက်ဖြန်ခါ
မစန္ဒာ - တိမ်ဖုံးလို့လမသာ
မစန္ဒာ - စိမ်းရွက်တစ်ဝေေ၀
မစန္ဒာ - ဂျီဟောသူ
မစန္ဒာ - ဆံဌဂံ
မစန္ဒာ - ပန်းပွင့်ခရေ
မစန္ဒာ - ပုစ္ဆာ
မစန္ဒာ - နှင်းဆီ
မစန္ဒာ - ၀တ္ထုတိုများ ၇
မစန္ဒာ - ၀တ္ထုတိုများ ၄
မစန္ဒာ - အရိပ်
My name is Ven Sunanda. I amastudent where University of Kelaniya in Sri Lanka.